ỤLỌ ahụ: Martin Vrijland
Agwo ahụ, Kundalini, Eve, ịhụnanya na nghọta
gbara akwụkwọ ỤLỌ ahụ	by Martin Vrijland	na 6 January 2016	• 11 Comments
Maka ezi nghọta nke isiokwu a, ọ bara uru na ị nwere ihe ọmụma okpukpe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bara uru ịmara akụkọ okike sitere na Bible. Akụkọ banyere Adam na Iv na-abịa ebe a n'ụzọ doro anya dị iche iche ma yie ka ọ bụ ihe karịrị akụkọ ụgha okpukpe [...]
N'anya, usoro a na-ejikọta ihe mbụ anyị nwere na isi iyi nke Chineke
gbara akwụkwọ ỤLỌ ahụ	by Martin Vrijland	na 9 April 2015	• 7 Comments
E nwere ọtụtụ ihe odide n'ime Akwụkwọ Nsọ. Ọ bụ nchịkọta akwụkwọ nke ọtụtụ mmadụ na-amalite ugbu a na-aghọta na anyị nwere ike iji nke a tụnyere akụkọ banyere taa; n'echiche na nnukwu ụlọ ọrụ mgbasa ozi kpebisiri ike na akụkọ niile anyị. Ya mere akwukwo nile nke akwukwo nso ka edere ya. N'ezie [...]
Obi ụtọ, egwu na njikọ ịhụnanya
gbara akwụkwọ ỤLỌ ahụ	by Martin Vrijland	na 4 April 2015	• 3 Comments
Mmadụ na-achọkarị obi ụtọ mgbe nile, mana ọ na-adịkarị ka ọ na-enweghị obi ụtọ na obi ụtọ ahụ. Ọ bụrụ na anyị ejiri ntị anyị hụ anyị n'anya, anyị na-enwe obi ụtọ, ma egwu nke ịla n'iyi na-eto eto. Ọ bụrụ na naanị anyị akwụ nnukwu ego ma zụta ụgbọ ala mara mma, mgbe ahụ, [...]
Nleta ha: 2.527.883